Nge-Agasti ka-2009-kwiNombolo ye-1 yeWebhusayithi yaseYurophu
Archives Monthly: Agasti 2009
3 EyeThupha 2009
I-Malekula Kid entsha ye-UBO yeChamp
Ngethamsanqa labantu ababengaphezulu kwama-3000 bebukele, uKali ”The Malekula Kid” Jacobus uphumelele iwonga le-Universal Boxing Organisation International Super Middleweight ngoJulayi 30 eWelkins Stadium, eLakatoro, kwisiqithi saseMalekula eVanuatu.
UJacobus wenze umsebenzi omfutshane wokudibanisa uTemo Kolitapa waseFiji, emmisa kumjikelo wesibini ukonwabisa abalandeli bakhe abaninzi ngeenxa zonke. UJacobus uphucula irekhodi lakhe ukuya kwi-12-3 ngee-knockout ezisithoba, kwaye inokuba ukhusela isihloko sakhe esitsha sele kukuwa oku.
Ukunyuselwa kwenziwa ngurhulumente wePhondo laseMalampa ngentsebenziswano noMnu Wesley Rasu.
Usompempe kunye nejaji: UReginald Leca, iijaji: uJeramaia Ledua noTevita Navuda.
Umkhuthazi uWesley Rasu, uKali Jacobus kunye noMkomishinala we-UBO Oceania uReginald Leca.